Mayelana NATHI - Zhejiang Feihu New Energy Technology Co., Ltd.
IZhejiang Feihu New Energy Technology Co., Ltd. ingumkhiqizi osebenza kahle futhi othumela kwamanye amazwe ohlanganisa ukwakhiwa, i-R & D, ukukhiqizwa nokuthengiswa kwamathuluzi amasha e-lithium. I-Feihu Technology inezitshalo zesimanje, imishini yokukhiqiza neyokuhlola yokuqala, ehlanganisa indawo engamamitha-skwele angama-30,000, indawo yokwakha engama-square metres ayi-20,000. Njengamanje, kunezisebenzi ezingaphezu kuka-400, kufaka phakathi amathalente aphezulu aphezulu, inhlangano enamandla neqembu lokumaketha
Imikhiqizo yethu imboza ama-12 / 16.8v / 21V wokuzivocavoca amandla, isikrufu somthelela esingu-21V, isikelo esingu-21V, isinqamu segadi elincane, isibhamu sokuhlanza umfutho ophakeme neminye imikhiqizo emisha. Imikhiqizo yethu isidlulile isitifiketi se-CE & GS, futhi i-Feihu Technology iphinde yadlulisa isitifiketi se-ISO9001: 2015 yokuphathwa kwekhwalithi. Ukusuka ekuhlolweni kwezinto zokusetshenziswa kanye nezingxenye ekuhlolweni kokuphepha ngaphambi kokuthi imikhiqizo ishiye ifektri, yonke inqubo ilawulwa ngokuqinile ngochwepheshe abangochwepheshe ukuqinisekisa ikhwalithi yomkhiqizo wokuqala
Kwemboni yethu etholakala Jinhua idolobha, eduze Ningbo futhi Shanghai port, ezokuthutha elula lokuthumela nokuvakashela. Inethiwekhi yokuthengisa ihlanganisa amazwe angaphezu kuka-60 nezifunda emhlabeni jikelele, njengeNingizimu-mpumalanga ye-Asia, iNingizimu Asia, iMiddle East nezinye. Ukuqinisekiswa kwekhwalithi nokwaneliseka kwamakhasimende yizinto eziseqhulwini zenkampani yeFeihu Technology.
Sine uchungechunge lokuphathwa kwenqubo yokulawulwa kwekhwalithi negumbi lab, ngaphezulu kwama-20 amasethi wokuhlola imishini yokuqinisekisa ukuthi yonke imikhiqizo inekhwalithi enhle ngaphambi kokuthunyelwa. I-Feihu Technology isuselwa ekukholweni okuhle, ekuthengisweni okwanele kwezimpahla, isevisi ephelele emva kokuthengisa njengomqondo, futhi iwine indumiso ephezulu evela kubathengisi yonke indawo
Sikumema ngokuzithoba ukuthi usivakashele futhi uhlole ukukhiqizwa komkhiqizo wethu, ukulawula ikhwalithi namandla wefektri